शिक्षा Archives - Page2of 17 - Changupatra
तपाईं यहाँ हुनुहुन्छ : गृहपृष्ठ › Category Archives › शिक्षा
शिक्षकले ‘राजीनामा’ दिए रु. १ देखि ३ लाखसम्म नगद पुरस्कार !
काभ्रे, २ चैत । काभ्रेको पनौति नगरपालिकाले दरबन्दी मिलानमा कठिनाई भएको भन्दै शिक्षकलाई स्वेच्छिक अवकास लिन अनुरोध गरेको छ । नगरपालिकाले आफ्नो नगर क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दी संख्या बढी भएको जनाउँदै शिक्षकलाई स्वेच्छिक अवकास लिनका लागि उत्प्रेरित गरेको जनाएको…
एसईई जेठ १३ गतेदेखि हुने
भक्तपुर, २५ फागुन । २०७७ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) जेठ १३ गतेदेखि हुने भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकले आउँदो जेठ १३ गतेदेखि २४ गतेसम्म परीक्षा गर्ने निर्णय गरेको हो । परीक्षा नियन्त्रक रामराज खकुरेलले एसईई जेठ २४…
भक्तपुर, १२ फागुन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित)ले चार शिक्षकलाई सम्मान गरेका छन् । भक्तपुरको वागीश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा लामो समय अध्यापन पश्चात अवकाश भएका चार जना शिक्षकहरुलाई अध्यक्ष बिजुक्छेंले सम्मान गरेका हुन् । कार्यक्रममा अध्यक्ष बिजुक्छेँले…
भक्तपुर, ८ फागुन । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन चाँगुनारायण नगरको दोस्रो अधिवेशन शनिबार भएको छ । अधिवेशनले महेन्द्रग्राम माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सोमकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय नयाँ कार्य समिति गठन गरेको छ । अधिवेशनले महिला उपाध्यक्षमा नानुमैंया गिरी, उपाध्यक्षमै बाबुकृष्ण…
डीन भट्टराईद्वारा ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजको अनुगमन, मेयरसँग सोधपुछ
भक्तपुर ६ फागुन । भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले अनुगमन गरेको छ । विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ संकायका डीन देवीप्रसाद भट्टराईको टोलीले भक्तपुर लिवालिस्थित इञ्जिनियरिङ कलेजमा अनुगमन गरेको हो । अनुगमनपछि डीन भट्टराईले कलेज सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं भक्तपुर…
शिक्षकलाई मेयरले खुवाए सपथ
भक्तपुर, ६ फागुन । भक्तपुरका शिक्षकलाई मेयरले सपथ खुवाएका छन् । कक्षा ८ को आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालनका लागि भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापतिले बुधबार सपथ खुवाएका हुन् । मेयर प्रजापतिले उनीहरुलाई नगरपालिकाको कार्यकक्षमा बोलाएर सपथ खुवाएका थिए । भक्तपुर…
शिक्षामा नवीन सोचको अभ्यास गर्दै वी किड्स, एक्प्लोर, लर्न र ग्रोको मान्यता लागू
भक्तपुर, ४ फागुन । भक्तपुरको सूर्यविनायकको पाण्डुबजार हाइटस्थित वी किड्स स्कुलले सरस्वती पूजाको अवसरमा मंगलबार अक्षरारम्भ कार्यक्रम गरेको छ । ससाना नानीहरुलाई अक्षर चिनाउने दिनमा विद्यार्थीको अक्षरारम्भ कार्यक्रम गरेको हो । सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं ६ मा रहेको स्कुलले त्यस…
-लक्ष्मीसुन्दर सुवाल गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः । गुरुःसाक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुवेनमः ।। गुरु जसले अशिक्षारूपी अन्धकारबाट शिक्षाको ज्योतितर्फ दोहो¥याई कसैको जीवनमा ज्ञान छर्ने त्यो व्यक्ति हो । जसको सम्मानमा धेरै श्लोक, लेख, कथा, कविता इत्यादिले धेरै पुस्तकका पानाहरू…
स्थापना दिवस मनाउने तयारीमा श्रीकृष्ण मावि, नगरपालिकाकै उत्कृष्ट बनाउने लक्ष्य
भक्तपुर, २१ माघ।वि.सं. २०२२ सालमा स्थापना भएको भक्तपुरको खरिपाटीस्थित श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयले स्थापनाको ५५ औं वार्षिकोत्सव मनाउने तयारी गरिरहेको छ । भक्तपुरको उत्तरपूर्वी भेगमा रहेको सो विद्यालय वि.सं.२०२२ साल फागुन १ गते स्थापना भएको थियो । सोही मितिलाई विद्यालयले सुवर्ण…